Ogaden News Agency (ONA) – Hogaanka Arimaha Dibadda oo ka dagay Sydney
Hogaanka Arimaha Dibadda oo ka dagay Sydney
Waxaa shalay gagida diyaaradaha ee caalamiga ah ee magaaladaSydneykasoo degay Madaxa Hogaanka Arimaha Dibada ee ONLF mudane C/raxmaan Maadeey. Halgame C/raxmaan oo maalmahan socdaal hawleed ku marayay gobolo ka mid ah wadankaAustraliaayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaaladaSydney.
Gagida diyaaradaha oo ay ku sugayeen xubno ka tirsan jaaliyadda ayaa waxaa kamid ahaa dadkii soo dhawaynayey saxiibkiisa halganka ay mudada dheer kusoo wada jireen ahna Gudoomiye ku xigeenka JWXO mudane Maxamed Ismaaciil Cumar.
C/raxmaan Maadeey iyo Maxamed Ismaaciil oo labadoodu kamid ahaa asaasayaashii jabhada ONLF ayaa si kalgacal leh isugu salaamay goobtii soo dhawaynta.
Soo dhawayntii kadib ayaa Halgame C/raxmaan Maadeey loosoo galbiyay hooy si wanaagsan loo habeeyay oo loo sii diyaariayay. waxay nasiina yar ka dib isaga iyo dadkii soo dhawaynayey ay salaadii maqribka ku soo wada tukadeen masjidka caanka ah ee Gallipoli Mosque.
Gudoomiyaha Hogaanka Arimaha Dibada ee JWXO C/raxmaan Maadeey ayaa maalmo joogi doona magaalada Sydney isagoo la kulmi doona masuuliyiinta iyo qaybaha bulshada ee Jaaliyadda magaalada Sydney iyo qaar kamid ah shaqsiyaadka miisaanka ku leh wadankanAustraliaee fadhigoodu yahay magaala-madaxda Australia ee Canberra.